Guta reHarare Roita Muonera Pamwe Chirwere Chanetsa
Kukadzi 15, 2012
Masangano akazvimirira, achishanda akabatana nemasangano anomirira vagari vemuHarare, kanzuru pamwe nehurumende, ari kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukurwisa kupararira kwechirwere che typhoid.
Bazi rezveutano riri kupa veruzhinji ruzivo rwezvechirwere ichi nekushambadzira nzira dzekuzvidzivirira. Zvimwe zviri kukosheswa nehurumende inyaya yekuti vanhu vagare vachinwa mvura yakachena nguva dzose, pamwe nekukurudzira vanhu vari kugara munzvimbo dzanetsa chirwere ichi, kuongororwa kana vaine chirwere ichi kunyange havo vasiri kurwara.
Mumwe wevakoti vari kuita basa iri, ndiVa Maxwell Hungwe, avo vanoshanda pachiptara chekanzuru cheBeatrice Infectious Diseases.
VaHungwe vanokurudzira vanhu vose vari kugara munzvimbo dzine chirwere ichi kuti vaende kunotariswa nana chiremba kunyange vasingarware.
Asi mumwe mugari wemuHarare, Muzvare Marble Ganyiwa, vanoti kanzuru ichine basa rakawanda mukupedza chirwere ichi, sezvo vanhu vari kurambidzwa kutengesa zvinhu pachena, vari kuita izvi vachivanda mapurisa ekanzuru.
Kanzura weHarare, Va Peter Moyo, vanotiwo mapurisa ari kuvakanganisa kuita misangano kuitira kuti vataure neveruzhinji pamusoro pechirwere ichi.
Sezvo mwaka wekutengesa fodya watanga, pava kutyirwa zvakare kuti varimi kana voungana kwavanotengesera fodya yavo, zvinogona kuti chirwere ichi chipararire zvekare. Mukuru weTobacco Industries and Marketing Board, VaAndrew Matibiri, vanoti vakatora matanho ekudzivivira zvirwere izvi.
Vakuru vesangano reCombined Harare Resident’s Association vasangana nevakuru vekanzuru vakakurukura kuvharirwa mvura kwakaitirwa vanhu vanosvika mazana mashanu kuDzivarasekwa muHarare. Mukuru wesangano iri, VaMfundo Mlilo, vanoti kanzuru haisi kuratidza chido chekuda kudzvirira chirwere ichi, kana ichivharira vanhu mvura.
Masangano eWorld Health Organisation, United Nations Children’s Fund, nemamwewo, ari kubatsirawo vagari vemuHarare nemapiritsi ekuchenesa mvura senzira yekuedza kudzivirira chirwere chetyphoid. Masangano aya zvekare ari kubatsira nemishonga nezvimwe zvakadaro pakurwisana nechirwere ichi.
Mukuru weWorld Health Organisation, Doctor Custodia Mondhlate, vanokurudzirawo kudzivirirwa kwe typhoid uye kushanda nemazvo kwemasangano ose anoita zveutano.
Bazi rezvehutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino kubva pachakatanga kunetsa muHarare.
Hurukuro naAmai P
Hurukuro naVa Peter Moyo